Tontolon'ny fafana ara-panahy amin'ny fanatanjahantena
Ho an'ny olona maro, ny fanatanjahantena dia tsy fialam-boly fotsiny, fa fomba fiainana. Saingy, indrisy, amin'ny fomba atrehin'ny atleta ny sakana, ohatra, ny hafanana amin'ny fahavaratra na ny hafanana mangatsiaka. Tsy ela akory izay, ny toetr'andro dia antony lehibe hanesorana fiofanana na fifaninanana, fitsangatsanganana eny an-tendrombohitra na fanjonoana. Androany, tsy ilaina izany, satria eo amin'ny tsenan'ny fanatanjahan-tena sy ny akanjo fitetezam-paritra, ny tena famonjena amin'ny toetr'andro ratsy dia niseho - akanjo voafaritra tsara ho an'ny fanatanjahantena. Ny fitaovana mandroso ampiasaina amin'ny fanasongadinana an'ity zavatra mahafinaritra ity, dia mihoatra ny fanantenana lehibe indrindra: manatsara ny halehiben'ny fampiononana sy ny fiarovana izy ireo, manakana ny vokatra mampidi-doza amin'ny hafanana sy ny hôpitera.
Ankehitriny ny asan'ny atleta dia ny fomba fisafidianana ny kilalao ara-pahadiovana ho an'ny fanatanjahan-tena mavitrika. Raha ny marina, ny safidy tsara dia miankina amin'ny fahombiazan'io karazana akanjo io hanatanterahana ireo asa natolotra azy.
Fomba ahoana no hisafidianana akanjo fitetezana thermique ho an'ny fanatanjahan-tena?
Raha te hifanaraka tsara amin'ny atin'akanjo ianao, dia mila mamaritra ny fepetra eo amin'ny fiasa. Ohatra, ny akanjo fitetezana tohodrano ho an'ny skiing ao aminy dia tsy hitovy amin'ny akanjo natao ho an'ny hazakazaka na bisikileta, fa maninona - andao hanandrana hamoaka izany.
Miankina amin'ny rafitra ara-pahasalamana sy ny fizotran'ny asa atao, ny fitaovana izay ametrahana ny lentan'ny thermaly dia azo amoronana, voajanahary, na mifintina. Ny synthétique, indrindra ny polyester, dia nanatsara ny toetra kapila: manala ny hafanana amin'ny vatany izy ary tsy mahasoa. Vokatr'izany dia maina ny hoditra sy ny akanjo fitafiana mifanila aminy. Noho izany, ny akanjo vita amin'ny tsiran-koditra tanteraka dia fikarohana ho an'ireo olona mihetsika tsy tapaka. Noho izany, ny kilalao ara-pahadiovan'ny skiing dia azo avy amin'ny Coolmax fibre. Ny akanjo avy Coolmax dia mitoto avo roa heny haingana toy ny kodiarana tsotra, noho izany dia mitoetra maina ny olona na dia aorian'ny fiterahana mafy aza.
Fanamboaran-damba hafa ho an'ny kiraro fitondra mandeha ho an'ny skiing, izay vokatry ny toetr'andro ambany. Satria amin'ity tranga ity dia ilaina ny manahy fa tsy ny fanesorana ny fahavoazana, fa koa ny fiarovana ny hafanana. Amin'ny ankapobeny, ny onjam-peo ara-pahasalamana ho an'ny fanatanjahan-tena ivelan'ny trano dia voapetaka amin'ny fitaovana mifangaro, izay ny sehatra voalohany dia miasa ho an'ny drafitra maivana amin'ny hafanana, ny teboka faharoa miaraka amin'ny fanampiana volon'ondry - ho an'ny fampangatsiahana. Ho an'ny mpitaingina, ny mpanamboatra dia namolavola modely manokana momba ny lobolobo ara-tsimok'andriana miaraka amin'ny tsangambato eo amin'ny elany sy ny lohalika izay hiaro ny hatsiaka, raha ny tanana sy ny tongony dia toerana iray maharitra.
Ny fitandremana ara-pahasalamana ho an'ny fanatanjahan-tena rano dia tokony hanomezana fepetra manokana Manokana manokana ny mpitsikilo mba hisafidy ireo hetsika rano mba hisafidianana akanjo vita polypropylène na polyester tsy misy fanampiana voajanahary. Ny fisehoan-javatra iray dia tsy fisian'ny fanjonoana amin'ny ririnina fotsiny, fa mandritra ny ora maro dia tsy maintsy mipetraka amin'ny lavaky ny ranomandry ianao.
Fanoratana fohy amin'ny T-shirts ho an'ny zazavavy
Karazana akanjo tsy misy tanany
Ny ririnina ho an'ny vehivavy Moncler
Ranty ny ririnina vehivavy
Ny akanjo vita amin'ny vehivavy - ny karazana, ny fomba fisafidianana, ny fitafy, ny fomba fanasana?
Casadei mofomamy amin'ny sambo miafina
Aiwory loko akanjo
Boots ety amin'ny vita amin'ny hoditra
Lecho amin'ny piper sy tomato
Ny gorodona ao amin'ny trano fidiovana ao amin'ny trano hazo
Modely kiraro - fararano 2016
Ruby Rose dia nanohina ny mpankafy azy tamin'ny fahantrany tao amin'ny Country Music Awards
Aphid amin'ny paiso - ahoana no hiady?
Fitiavana amina poma
Ny fisorohana ny gripa amin'ny ankizy mianatra any am-pianarana
Tempolin'ny Firenena Rehetra
Ahoana no fomba fanaovana palitao amin'ny balcony amin'ny tananao?
Shish kebab ao anaty lafaoro ao anaty rantsantanana ho an'ny famokarana
Famafazana fanafody misy volon'ala mineraly
Fiakanjo fampakaram-bady fohy miaraka amin'ny fiaran-dalamby
Dita von Teese sy Marilyn Manson
Nahoana ianao no tsy afaka matory ao amin'ny tranomboky?
Ny akanjo hariva ho an'ny vehivavy matavy no tsara indrindra amin'ny fety
Stucco eo ambanin'ny vato
Sakafo ho an'ny lasopy holatra amin'ny vary orza